ဂဏန်းလက်ကွက်အတန်းဖွင့်ထားသော Google Keyboard ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Androidsis ပါ
ပဉ္စမဂဏန်းအတန်းကိုဖွင့်ထားသောဂူဂဲလ်ခလုတ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
နံပါတ်အတန်းပါသော Google ကီးဘုတ် (ပဉ္စမတန်း)
အောက်ပါဆောင်းပါး၌သင်တို့အားလုံးကိုငါမျှဝေလိုသည် မူလ Google ကီးဘုတ်၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်း, Google က Keyboard ကို ပဉ္စမမြောက်ဂဏန်းအတန်းအား option ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ဖွင့်ထားသည် ? 123 ဒီနံပါတ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုခေါ်ဖို့
El မူရင်း google keyboardလေးတန်းပါသောအတန်းကိုသေးငယ်သောဖန်သားပြင်များနှင့်ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်၊ ၎င်းသည်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသည်မျက်နှာပြင်ငါးလက်မမှလူကြိုက်အများဆုံးစက်ခြောက်လုံးအထိဖြစ်သည်။ လက်ကမ်းစာစောင်များ.
ဤပိုကြီးသော terminal များထဲမှတစ်ခုရှိသည့်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်၊ ဤသည်မူလ Google ကီးဘုတ်၏ဤပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Google က Keyboard ကိုဤပဉ္စမတန်း၌၎င်း၏ဂဏန်းဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများကိုတိုက်ရိုက်လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖွင့်ထားသည်။
၎င်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တပ်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သည် ဒီ apk ကို download လုပ်ပါ ပြီးတော့အဲဒါကိုမူရင်းဗားရှင်းနဲ့အရင်ရိုက်ကူးပါ။ မူရင်းဗားရှင်း Google က Keyboard ကို ၎င်းကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်သည် ဒီ link ကို နှိပ်၍ Play Store.
အဲဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ် လေးတန်းဗားရှင်းကိုပထမဆုံး install လုပ်ပါ မဟုတ်ရင်အသစ်ပြုပြင်ထားတဲ့ apk အသစ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ဂူဂဲလ်သည်စတော့ရှယ်ယာ Android ကီးဘုတ်ကို Google Play သို့ထပ်ထည့်သည်
ဒေါင်းလုပ် - Google Keyboard လေးတန်း, Google Keyboard ငါးတန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ပဉ္စမဂဏန်းအတန်းကိုဖွင့်ထားသောဂူဂဲလ်ခလုတ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Fabian Gonzalez placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Fabian Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
pufff၊ ၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်နှင့်သာအလုပ်လုပ်ပါသလား။ သနားစရာကောင်းလိုက်တာ။ စပိန်ကီးဘုတ်အတွက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလား။
အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်အတွက်သာအလုပ်လုပ်သောသေးငယ်သည့်အသေးစိတ် အနှစ်ချုပ်၊ စပိန်စကားပြောသူအတွက်၎င်းသည်အကျိုးမရှိပါ။
မင်းပြောတာမှန်တယ် mea culpa! တကယ်တော့ငါကအဲဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့အချိန်မရှိတာနဲ့တရားဝင် XDA thread မှာသူတို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအတွက်သာသတိပေးတာမဟုတ်ဘူး။
အားလုံးကိုရိုသေလေးစားစွာဖြင့်၎င်းတို့သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုလုပ်မီမှတ်တမ်းတင်သင့်သည်၊ အနည်းဆုံးအချက်အလက်များရယူသောအရင်းအမြစ်ကိုဖော်ပြပါ။ မင်း web နဲ့သယ်ဆောင်လာတဲ့ပရောဂျက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့ကအရမ်းကောင်းပါတယ်။
ပုံမှန် Trojans တွေအကြောင်းတော့မပြောလိုပါဘူး ...
သူတို့သည်စပိန် qwerty တွင်ကိုယ်ပိုင် input method ကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး input method ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ထွက်လာလိမ့်မည်
LG G2 ၏ပုံတည်ငြိမ်မှုသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ LG က၎င်းကိုကြက်သားဖြင့်ရှင်းပြသည်